Ibhodlela Lokunakekela Ingilazi Yomuntu, Ibhodlela Lezingilazi Engilazi, I-Glass Jar - Hoyer
Sinezinhlobo ezahlukahlukene zamabhodlela asezingeni eliphakeme!
SAMPLES MAHHALA zingathunyelwa ukuze kuhlolwe ikhwalithi!
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso iyatholakala!
Sicela ushiye umlayezo kithi uma unemibuzo, sizokubuyisa kungakapheli amahora angama-8.
Njengomdlali ohamba phambili futhi ongumgijimi ophambili embonini yamabhodlela engilazi eChina, uHoyer Glass ubambe iqhaza kakhulu ekucwaningeni nasekuthuthukiseni, ekwakheni, ekwakheni, ekumaketheni nasekuhwebeni zazo zonke izinhlobo zemikhiqizo esezingeni eliphezulu yengilazi.
Manje, sisebenza ochungechungeni oluhlukahlukene lweengilazi zezinhlamvu ngezinkulungwane zezinhlobo, njengebhodlela lokunakekelwa komuntu siqu, ibhodlela lewayini le-glass, i-glassware jar, ingilazi yeglasi, ibhodlela lezemithi yengilazi, ibhodlela lesiphuzo seglasi neminye imikhiqizo ehlobene nayo.